Toyota Crown Majesta 2004 (#611444) ကို Ahlone မြို့နယ်တွ... | CarsDB
2018-04-08 16:18:08 +0630
‼ 2004 Toyota Crown Majesta.
ကိုယ်တိုင်သွင်းစီးထားတာတဲ့။ မြို့ပြင်တောင်မထွက်ဘူးတဲ့ကားလေး။ စသွင်းထားတာ ကီလို ၂၀၀၀၀ နဲ့ အခု ကီလို ၅၆၀၀၀ ရောက်ပြီ။
အတိုက်အခိုက် လုံးဝမရှိ။ အနောက်ဘယ် တံခါးခြစ်ရာပါလို့ ဆေးရှယ်လေးပြန်မှုတ်ထားတယ်။ ကျန်တာကတော့ နံပါတ်ဖြုတ်ပြီးကြည့် အသစ်တိုင်းပဲ။
နံပါတ်လှ ကားရှယ် ကီလိုနဲ ရှားပါးဇိမ်ခံကားလေး။ လေအိတ် လေးလုံးသက်တန်းကုန် ဆွေးကုန်လို့ လေအိတ်ဖြုတ် Crown 2004 ကွိုင်လျှော့ဘား အသစ်တွေထည့်ထားလို့ လေအိတ်ပေါက်လို့ စိတ်ညစ်ရမဲ့ ရောဂါကင်းပြီး ငြိမ့်ငြိမ့်လေးစီးလို့ရပါပြီ။
လေအိတ်လဲလို့ မငြိမ့်ဘူးလာမလုပ်နဲ့ စမ်းမောင်းလို့ ကားပေါ်ကမဆင်းချင်ရင် ပိုက်ဆံသာတစ်ခါတည်းယူလာပြီးဝယ်သွားလိုက်ပါ။
အင်္ဂျင်ကောင်းချက်ကတော့ မမေးနဲ့ workshop ဆရာခေါ်ပြလို့ရတယ်။
HUD, Round Sonor.
Rear Auto Sunshade.
Rear left and right door sundshade.
Round Aircon, Cold Box.
310 Lakhs , ၃၁၀ သိန်း
Lot Number: #611444
ကျပ် 332 သိန်း
ကျပ် 810 သိန်း